Oraahda Abriil | Saadaasha Shabakadda
Abriil. Bisha qaraxii guga. Ubaxa ayaa muuqaalkooda muujiya, geedaha waxaa ku daboolan caleemo, oo tartiib-tartiib ah dhaxanta iyo barafka ayaa looga tagayaa. Shimbiraha ayaa si farxad leh u heesaya iyadoo cayayaanka ay hawlahooda dib ugu bilaabayaan cirka hoostiisa oo mararka qaar khiyaano badan kara.
Sida qorraxdu uga soo baxdo jihada subax kasta, daruuraha ayaa ku dabooli kara daqiiqado gudahood, taas oo sababi karta heerkulka. Laakiin, Maxay odhaahda Abriil nooga sheegaan cimilada?
1 Sidee ayey tahay bisha Abriil gudaha Isbaanish?
2 Oraahda Abriil
Sidee ayey tahay bisha Abriil gudaha Isbaanish?
Almond wuxuu ubaxsaday La Quinta de Los Molinos (Madrid)
Isbaanishka Abriil celcelis ahaan heer kulkiisu yahay 13 digrii centigrade. Waqooyiga jasiiradda iyo buuraha dhaadheer dhaxan hoos u dhacda -8ºC badanaa way dhacdaa, halka inta soo hartay meerkuridu ay ka sarreyso 20ºC, gaar ahaan gobolka Mediterranean.
Haddii aan ka hadalno roobka, celceliska roobka waa 92mm, xoog saarista gaar ahaan waqooyiga-galbeed kalabar jasiiradda. Jasiiradaha Canary caadi ahaan waa bil qalalan, sidoo kale Badda Dhexe.
Imaatinka Abriil waa gu ’; dheecaan iyo dhiig beddel: waa waqtiga ay noloshu dib u soo noolaato. Howsha caadiga ah ee beeraha iyo keymaha ayaa soo laabanaya. Sidoo kale waa xilliga isku-tagga xayawaanka badan.
Bishii Abriil, waxaad gooysay yamaarug waxaadna koraysa kun: iyada oo kororka heer kulka iyo saacadaha qorraxda, geedaha ay ku koraan si la yaab leh, ilaa heer in inkasta oo goosgoosyada, muddo yar gudahood ay mar kale soo bixi doonaan, midna aan ahayn, laakiin in badan oo kale.
Bishii Abriil, kaliya burburka ayaa kari kara: Marka ay khudaartu ka soo baxdo hurdo la'aan, dheecaanku wuu soo baxayaa, markaa haddii hadda la goynayo halista ah in la waayo waa mid aad iyo aad u sarreysa, maadaama oo boog kasta ay ku luminayaan dheecaan badan.
San Marcos, waxaa jiri doona kudallo dhulka yaal: Maalinta Saint waa 25-ka Abriil, waa maalin inta badan ay roobabku badan yihiin.
Jiilaalku ma dhaafi jirin illaa Abriil dhammaado: Waa run. Sidii aan horay u soo sheegnayba, Abriil waa bil khiyaano ah. Marka waxaa lagugula talinayaa inaadan dhigin dhamaan dharkaaga diirran illaa May ay timaado, waa haddii ay dhacdo.
Bishii Abriil dhaxan, waxay raacdaa roobdhagaxyaalaha: marka wejiga hore ee qabow soo galo, jawigu wuxuu noqdaa mid aan xasilloonayn oo daruuro qaab ballaaran oo horumar toosan wataa oo roobdhagaxyaale keena; ka dib, hawadu way xasiltaa oo heer kulka ayaa hoos u dhacaya, iyadoo cirka laga tagayo daruuro la’aan, waana marka uu dhaxantu soo muuqato. Si looga fogaado qasaarooyinka geedaha jardiinada, waxaa lagugula talinayaa inaad u feejignaato saadaasha cimilada si aad u awoodo inaad ilaaliso dhirta haddii ay dhacdo roobab baraf wata.
Abriil Abriil, ama adhijirku wuxuu weydiistaa doonyaha caawimaad ama rahyadu waxay ku dhintaan dhulka qalalan: Bishan ama waxay noqon kartaa mid aad u roob badan ama aad u qalalan. Badanaa ma jiro meel dhexe.
Abriil Roob-doon ah ayaa ka dhigaysa Maajo qurux badan: waana run. Haddii uu roob da'o bishaan waxaa hubaal ah in May ay noqon doonto mid aad u qurux badan, maadaama dhirta ay awood u yeelan doonaan inay si aad ah u sii koraan, sidaa darteedna beeraha iyo jardiinooyinku ay u muuqdaan kuwo cajiib ah
Abriil, haa wanaagsan bilowga, dhammaadka xun: beeraleydu waxay ka baqayaan hadii aan ku bilowno bisha afaraad ee sanadka lugta midig, inaan si xun ku dhameyn doono. Taasina waa si sax ah waxa dhici kara: waxaan haysannaa 10 ama 15 maalmood oo aad u wanaagsan ama aad u xun, kuwa kalena ay yihiin kuwa ka soo horjeedda.
Haddii ay onkod yeelato Abriil, diyaari daboolka oo seexo: oo hadaad jeceshahay dhawaqa duufaanta, waxaad u badan tahay inaad xitaa maalintaas ka sii wanaagsanaan doonto; Ama inaad doorbideyso inaad daaqadda u janjeerto si aad u aragto. In kastoo, haa, ha iloobin jaakada maxaa yeelay qabow ayey noqon doontaa.
Abriil onkod, xagaaga wanaagsan ayaa imanaya: haddii ay jiraan dabeylo inta lagu jiro bisha Abriil, waxaan heli doonnaa xagaa ka fudud oo aan qaadno.
Abriil oo dhoola cadeynaya, qabow dadka dila: Cirku waa muuqan karaa, laakiin dabaysha dhacda mararka qaarkood waa qabow. Marka bishaan waxaan ku raaxeysan karnaa maalmo maalmaha cimiladu wanaagsan tahay iyo heerkul wanaagsan, laakiin haddii ay timaado waqti aan u maleyno inaysan qabow qaboobi doonin, waa inaannaan isku kalsoonaan.
Abriil Abriil, maalin kasta laba maydhasho: ma jiro meel dhexe. Ama abaar, ama roobab mahiigaan ah. Qeybo ka mid ah dalka roob ayaa si xoog leh uga da'a mararka qaar.
Bishii Abriil asparagus aniga ahaan, Maajo faraskayga: Haddii aad ka mid tahay kuwa ku raaxeysanaya inay soo gooyaan dhir, ka faa'iideyso Maarso-Abriil, maxaa yeelay bisha Maajo aad ayey u adkaan doonaan oo lama cuni karo.
Bishii Abriil roobab badan ayaa da'a: waa mid ka mid ah odhaahda ugu caansan. Qeybo ka mid ah dalka roobabku waa kuwo soo noqnoqda; nasiib daro, kuwa kale ficil ahaan ma jiraan.
Abriil, Apriloso iyo biyaheeda ayaa odayga ka soo bixinaya godka: marka la gaaro roobabka, orso ayaa ka baxaysa godkeeda si ay u quudiso ka dib markuu jiilaal ku qaatay nasasho.
Ma taqaanaa oraahyo kale oo Abriil ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Oraahda Abriil
SAWIRRO: Saxaraha Koonfur-bari Kalifoorniya ayaa soo noolaanaya ka dib shan sano oo abaar ah
2050, culeyska kuleylka wuxuu saameyn ku yeelan doonaa 350 milyan oo qof oo dheeri ah